Drafitra tantaram-pitiavana any Madrid | Vaovao momba ny dia
Drafitra tantaram-pitiavana any Madrid
Madrid Tanàna manome zavatra tsy misy farany ho hita sy hatao isika ary raha mandeha mpivady dia mety ho lasa toerana tena tantaram-pitiavana. Na dia marina aza fa manana tranombakoka tsy tokony hotadiavina izy io, manana tranokala tsy dia fantatra loatra koa izy io fa tsy tokony halahelo ny olona mitady fitiavana sy fiainana manokana.
Ka, ankoatran'ny Prado, ny Reina Sofía ary ny Thyssen-Bornemisza Museum, ho hitantsika anio izay atolotry Madrid an'ireo mpivady am-pitiavana izay manapa-kevitra ny hitsidika, hitsidika ary hiaina izany. Toerana, fitsangatsanganana ary tsy ampoizina tantaram-pitiavana ao Madrid.
1 Toerana romantika hitsidika mpivady
2 Asa atao hatao mpivady ao Madrid
3 Gaga ho an'ny namanao ao Madrid
Toerana romantika hitsidika mpivady
El Lapan'ny mpanjaka Madrid Trano mahafinaritra tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io, izay miorina amin'ny toerana mahafinaritra misy fomba fijery mahafinaritra. Ankoatry ny atiny (sary vongana, fanaka, ravin-kazo, antitra ary sary hosodoko) manodidina azy dia misy zaridaina tena tsara, ny zaridainan'i Puerta del Moro, izay toerana mahafinaritra handehanan'ny tanana eo amin'ireo lalana ala, loharano kely sy mahafinaritra, voninkazo maro ary maro hafa fitiavana eny amin'ny rivotra.
Ny Royal Palace dia eo amin'ny Calle Bailén ary misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva, eo anelanelan'ny Oktobra sy Martsa, ary hatramin'ny 8 alina hatramin'ny aprily ka hatramin'ny septambra. Raha olom-pirenena eropeana ianao dia tsy mandoa vola miditra eo anelanelan'ny 6 sy 8 hariva ho an'ireo daty ireo.
Carte poste romantika iray hafa azonao atao a mitaingina sambo ao amin'ny Retreat. Ny Retiro Park dia iray amin'ireo toerana mahazatra indrindra ho an'ny mpivady fitsangatsanganana miaraka amin'ny Crystal Palace, ny zohy misy riandrano sy ny vorombola mandehandeha mamaky ny Cecilio Rodriguez Gardens ... Ilay dobo lehibe izay ivon'ny valan-javaboary dia natsangana tamin'ny voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary hatrizay dia io no fisehoan'ny hetsika ara-kolontsaina sy fialamboly maro.
Afaka mandeha any ianao amin'ny alàlan'ny metro (L9 sy L2) na amin'ny bisy isan-karazany. Manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma Ny fanofana sambo dia mitentina 6 euro ary hatramin'ny faran'ny herinandro dia tafakatra hatramin'ny 8 euro. 2 euro ny sambo masoandro. Manofa izy ireo ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 5:30 hariva na hatramin'ny 8:30 alina, arakaraka ny fotoan'ny taona. Raha ny sambo masoandro dia hatramin'ny 2 na 4 hariva.
Somary sempotra ihany ny maripana any Madrid amin'ny fahavaratra, mihoatra ny 30ºC foana izy ireo, ka hevitra tsara ny mandeha eny akaikin'ny rano. Amin'ny alina, rehefa manome aina antsika ny masoandro farafaharatsiny, dia afaka mankafy ny volana sy isika miaina hariva tantaram-pitiavana mandeha mamaky ny Madrid Río Park. Ny fijanonana eo amin'ny tetezana Segovia hijerena ny jiro amin'ny katedraly na ny Royal Palace mihitsy no tsy maintsy atao.
La tampon-trano ao amin'ny Círculo de Bellas Artes manome ny iray amin'ireo fomba fijery kanto mahafinaritra an'i Madrid izy. Miakatra amin'ny ascenseur ianao aorian'ny fandoavana ny tapakila amin'ny fandraisana ary ny rihana ambony dia 56 metatra ambonin'ny arabe Alcalá, noho izany ny fijery dia 360º. Ity habakabaka amin'ny haavo ity dia manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 2 hariva, zoma ary alohan'ny fialantsasatra dia hatramin'ny 3 hariva, Sabotsy manomboka amin'ny 1 maraina ka hatramin'ny 3 hariva ary ny Alahady sy ny fialantsasatra eo anelanelan'ny 11 maraina sy 2 hariva.
Manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady 4 euro ny tapakila Ary 5 ny vidiny raha mividy ny tapakila izay atambatra ny fidirana amin'ny tampon-trano sy ny efitrano fampirantiana. Afaka mandeha any ianao amin'ny alàlan'ny metro sy bus. Farany, manana isika ny fahitana ny Tempolin'i Debod amin'ny filentehan'ny masoandro. Ny filentehan'ny masoandro dia azo antoka fa ny fotoana feno fitiavana sy nofinofy indrindra na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ary raha misy tempoly taloha tazana, tsara kokoa. Etsy ambony, ny tarehiny dia hita taratra amin'ny rano amin'ny kamory ary ny jiro napetraka tamina paikady stratejika dia ny ambiny.
Asa atao hatao mpivady ao Madrid
Misy olona mankafy mandray a Andro spa amin'izay ianao afaka manomboka amin'izany. Mpivady maro no mizara spaoro mampiadana ary any Madrid dia misy safidy maro. ny Kenina Thai Massage, ny Caroli Wellness Club, El Hamman El Andaluz na ny Auditorium Spa, mba hanomezana anarana fotsiny ny tolotra izay be ao an-tanàna. Fotoam-panorana, fotoana iray ao amin'ny jacuzzi na sauna, aromatherapy ary faritra filomanosana ...
Raha tianao ny hetsika ara-kolontsaina sinema sy teatra dia akaiky eo foana. Sarimihetsika tantaram-pitiavana amin'ny sinema ao an-tanàna arahin'ny sakafo hariva labozia na fampisehoana mozika kilasika na hariva opera ao amin'ny Teatro Real, ny Teatros del Canal na i Reina Victoria. Miankina amin'ny tsironao izany. Safidy iray hafa, maoderina sy liana, dia hiara-mianatra kilasy fandrahoan-tsakafo. Mahafinaritra ary raha te hahandro tsy ampoizina mahafinaritra izy. Ary raha tsy Espaniôla ianao dia fomba iray hahafantarana ny tsiro Iberiana ihany koa.
Raha tianao kokoa ny zavatra an-drenivohitra noho ny mandehàna, misotroa ary mivoaha amin'ny tapas avy eo ianao dia afaka manomboka ny alina amin'ny iray amin'ireo tanàna afovoan'ny tanàna, ny Chueca, Lavapiés na Malasaña, ohatra. Ireto misy maromaro terraces mangatsiaka sy pub maro ary toerana hihainoana mozika.
Farany tsy afaka manadino momba ny trano fandraisam-bahiny ho an'ny mpivady. Ho an'ny maro dia tsy toerana tantaram-pitiavana izy ireo fa fantatro ny mpivady maro izay mamarana ny takarivan'izy ireo amin'izy ireo ary miala voly. Afaka mandeha adiny roa ianao na mijanona matory ary misy kalitao tena tsara.
Gaga ho an'ny namanao ao Madrid
Raha tsy eo an-toerana ianao ary mitsidika dia azonao atao ny manaitra ny vadinao amin'ny filazanao fa handeha ianao misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana tranainy indrindra eto an-tany: Zana-drahalahin'i Botín. Araka ny Ginness Book of Records, trano fisakafoanana tranainy indrindra izy ary toerana tsara hanandramana ny tsiron'i Madrid koa. Izy io dia tranokala iray notehirizina hatramin'ny zato ka hatramin'ny zato ka mendrika ny fitsidihana sy sakafo hariva.
Ny piknik dia tantaram-pitiavana ihany koa mba hahafahanao manao gaga ny olon-tianao amin'ny fitsangantsanganana mahafinaritra voalamina. Orinasa iray antsoina hoe Picnic Madrid no mitondra ny zava-drehetra amin'ny vidiny manomboka ao amin'ny 39 euros: frezy, sôkôla, ham, fromazy, tongolo nendasina, mofo, divay ... Ao ny Gourmet Picnic (54 euro), ny Classic (49 euro), ary ny Romantic Touch (39 euro). Misy toerana samy hafa: ny Retiro Park, ny Temple of Debod, ny Madrid Río Park ary ny Juan Carlos I.
Raha tianao ny hevitra dia tsy maintsy ataonao ny famandrihana farafahakeliny 12 ora alohan'ny ananan'ny orinasa mba hanam-potoana handaminana ny zava-drehetra. Ny sobika dia hahitana izay ilainao mba hankafizanao fitsangatsanganana amin'ny maha-mpivady (na miaraka amin'ny fianakaviana na namana, manapa-kevitra ianao): lamban-databatra, servieta, cutlery ary vokatra vaovao. Ny sobika dia zaraina manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 11 alina ary raha tsy tsara ny andro dia averina ny vola na averina haverina ny piknik.
Ahoana ny hevitrao momba ireo drafitra tantaram-pitiavana any Madrid?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Drafitra tantaram-pitiavana any Madrid
Torolàlana haingana hanidina miaraka amin'ny ankizy amin'izay toerana aleha
Inona no dikan'ireo loko pasipaoro?